သင့်အဖွဲ့ကို အောင်မြင်စေမည့် အစွမ်းထက်သောနည်းလမ်း ၁၀ ခု | Mycanvas
သင့်အဖွဲ့ကို အောင်မြင်စေမည့် အစွမ်းထက်သောနည်းလမ်း ၁၀ ခု
“မြန်မြန်သွားချင်ရင် တစ်ယောက်တည်းသွား၊ ဝေးဝေးသွားချင်ရင် အတူတူသွား” ဆိုတဲ့ စကားပုံကို ကြားဖူးကြမှာပါ။ များသောအားဖြင့် အောင်မြင်သောအသင်းအဖွဲ့တွင် အောင်မြင်မှုသည် ခေါင်းဆောင်စံနှုန်းများကို သတ်မှတ်ပေးသူမှ စတင်သည်။
ဒါတွေကတော့ သင့်ရဲ့အဖွဲ့ကို အောင်မြင်အောင် ထိန်းကျောင်းနိုင်တဲ့ အစွမ်းထက်ဆုံး အလေ့အကျင့် ၁၀ ခုဖြစ်ပါတယ်။
1. သူတို့ရဲ့ အရည်အချင်းတွေကို လွတ်လပ်စွာ အသုံးချခွင့်ပေးပါ။
အကောင်းဆုံးခေါင်းဆောင်တွေက ဘေးဖယ်ထားပြီး သူတို့အဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကို အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်အောင် လုပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါ။ ထိန်းချုပ်မှုသည် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် ဦးတည်သော်လည်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်သည် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆီသို့ဦးတည်သည်။
2. သူတို့ကို အမှားလုပ်ခွင့်ပေးပါ။ /
ရှက်တတ်တာထက် ကျရှုံးတာက ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာ သင့်ရဲ့လူတွေကို သေချာသိအောင်လုပ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည် အောင်မြင်သောအသင်းအဖွဲ့များကို ဖန်တီးမည်ဆိုပါက သင်ဦးဆောင်သော အမှားများသည် လုပ်ငန်းစဉ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ကြောင်း နည်းပြပေးပါ- ၎င်းတို့သည် သင့်အား ယခင်ကထက် ပိုကောင်းသည့်အရာအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည့် စွမ်းအားရှိသည်။
3. ဆွဲဆောင်မှုရှိသော မျှော်မှန်းချက်ဆီသို့ အတူတကွ လုပ်ဆောင်ရန် သူတို့ကို လမ်းညွှန်ပါ။
တူညီသောအမြင်တစ်ခုဆီသို့ လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် မည်သည့်အဖွဲ့အတွက်မဆို တိုးတက်မှု၏အစဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် အောင်မြင်မှုဆီသို့ လျှောက်လှမ်းနေပြီဖြစ်ကြောင်း သေချာသောလက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ မျှဝေထားသော ဆွဲဆောင်မှုရှိသော မျှော်မှန်းချက်တစ်ခုဆီသို့ အတူတကွလုပ်ဆောင်သောအခါ သင်အောင်မြင်နိုင်သည်မှာ အံ့ဩစရာပင်။
4. ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ပေါ်လာပြီး အတွင်းခေါင်းဆောင်များကို မြှင့်တင်ပါ။
ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အလေ့အထက သင့်အဖွဲ့ကို တွန်းပို့နေတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်- ဒါကြောင့် ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပေါ်လာပြီး စံနမူနာပြပါ။ သင်ပြောသည့်အရာသည် သင်လုပ်ဆောင်သည့်အရာနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သေချာပါစေ။ ထို့နောက် သင့်အဖွဲ့အား ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ခေါင်းဆောင်မှုသို့ တက်လှမ်းရန် အားပေးခြင်းဖြင့် နောက်တစ်ဆင့်တက်လှမ်းပါ။ အသင်းသားတိုင်းအား ခွန်အားဖြစ်စေပြီး အားပေးခြင်းဖြင့် သင့်လျော်သောခေါင်းဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍသို့ ပြောင်းရွှေ့ရန် စွမ်းရည်ပေးပါ။
5. အောင်မြင်ဖို့အတွက် သူတို့လိုအပ်တာတွေကို ပေးပါ။
သင့်အဖွဲ့အတွက် လိုအပ်သည်များကို ရှာဖွေရန် ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းတစ်ခုရှိသည်- သူတို့ကိုမေးပါ။ သူတို့လိုချင်တာမှန်သမျှကို သင်အမြဲမဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပေမယ့် သူတို့လိုအပ်သမျှကို သေချာအောင် သင်အမြဲကြိုးစားနေရပါမယ်။
6. ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးပါ။
လူတိုင်းဟာ အပန်းဖြေအနားယူပြီး ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ အချိန်တွေမှာ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုကောင်းလာကြပါတယ်။ ပျော်ရွှင်မှုသည် လူတို့အား ခက်ခဲသောအလုပ်များနှင့် ကြီးကြီးမားမား သတ်မှတ်ရက်များကို ဖြတ်ကျော်နိုင်စေသည့် အရာဖြစ်ပြီး အကောင်းဆုံးခေါင်းဆောင်များသည် အသင်း၏အလုပ်ကျင့်ဝတ် သို့မဟုတ် ထူးချွန်မှုအပေါ် ကတိကဝတ်များကို မထိခိုက်စေဘဲ ၎င်းကို မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို သိကြသည်။
7. စံနမူနာပြ တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုကို သင်ကြားပေးပါ။
သင်ပြောသမျှကို လိုက်လျှောက်ဖို့ ယုံကြည်နိုင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်မျိုးဖြစ်ပါစေ။ အောင်မြင်သောခေါင်းဆောင်များသည် ၎င်းတို့၏ ပြောစကားနှင့်အညီ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရန် လိုအပ်ကြောင်း သိကြသည်။ ၎င်းသည် သင့်ကို အားကိုးနိုင်သည်ဟု အခြားသူများအား ပြောပြပြီး သင်မျှော်လင့်ထားသည့် အပြုအမူမျိုးကို ပြသသည်။
8. ပြတ်သားပြီး ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရှိပါ။
ဆုံးဖြတ်ချက်များကို စဉ်ဆက်မပြတ်အခြေခံ၍ ချမှတ်ရန်လိုအပ်ပြီး အောင်မြင်သောခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူ တိုးတက်နေသောအဖွဲ့များသည် ပြတ်ပြတ်သားသားနှင့် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို သိရှိသည်။ တိုးတက်မှုနှင့် အောင်မြင်မှုသည် ဆုံးဖြတ်ထားသော လုပ်ဆောင်မှုပေါ်တွင် မှီတည်နေပါသည်။ အကောင်းဆုံးခေါင်းဆောင်များသည် တစ်ယောက်တည်းရပ်တည်ရန် ယုံကြည်မှုရှိကြပြီး ခက်ခဲသောဆုံးဖြတ်ချက်များချရဲသည့်သတ္တိနှင့် အခြားသူများ၏လိုအပ်ချက်များကို နားထောင်ရန် နားလည်ကြသည်။
9. Win-Win အခြေအနေများကို ဖန်တီးပါ။
အမြင့်ဆုံး အောင်မြင်မှု သည် အခြားသူများကို အနိုင်ယူခြင်းမှ မဟုတ်ဘဲ Win-Win ဖြေရှင်းနည်းများကို ဖန်တီးခြင်းမှ လာသည်။ လူတိုင်းသည် သေးငယ်သော အမြတ်ငွေများမှ ရရှိကြပြီး အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးလေလေ အကျိုးပိုကြီးလေဖြစ်သည်။
10. သူတို့ကို တစိုက်မတ်မတ် ချီးမွမ်းပြီး သူတို့ကို အမြဲတန်ဖိုးထားပါ။
အောင်မြင်တဲ့အသင်းတစ်သင်းကို လိုချင်ရင် ပျော်ရွှင်တဲ့လူတွေကို လိုချင်ရင် သူတို့ကို အသိအမှတ်ပြုပြီး ပိုချီးကျူးရပါမယ်။ သင့်အဖွဲ့ကို သူတို့ဘာဖြစ်လာနိုင်သည်ကို သင်သတိပြုမိကြောင်း အသိပေးလိုက်သောအခါ ယင်းသည် ၎င်းတို့၏ တိုးတက်လာနေသော အောင်မြင်မှု၏အကျိုးကျေးဇူးကို သင်စတင်ရနိုင်ချိန်ဖြစ်ပါသည်။